संक्रमित भन्छन्– ‘लाख होइन, करोडौँको धन्यवाद’ | चितवन पोष्ट दैनिक
संक्रमित भन्छन्– ‘लाख होइन, करोडौँको धन्यवाद’
भरतपुर । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि विश्व समुदाय नै औषधिको खोजीमा छ । केही देशहरुले विभिन्न खोपहरुको परीक्षण गराइरहेका छन् । तर, कोरोना संक्रमितहरु भने यस रोगसँग लड्ने बलियो हतियार उच्च मनोबल रहेको बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमित भई उपचाररत रहेका भरतपुर–६, केशरबागका ७५ वर्षीय सन्तबहादुर खाँडले क्यान्सर र कोरोनासँग एकैपटक जुध्दा आफू विचलित नभएको बताए । कोरोनाको श्वासप्रश्वासको बिरामीमा बढी जोखिम हुने भनिरहँदा खाँड फोेक्सोकै क्यान्सरको उपचार गराइरहेका थिए ।
गत असार ४ गतेको परीक्षणमा मात्रै उनमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो । भरतपुर अस्पतालले कोरोना जोखिम नरहेको भन्दै जेठ ३० गते नै घर पठाउन खोजे पनि वृद्धवृद्धा आफूहरु अन्य रोगबाट पनि संक्रमित रहेकाले पूर्ण निको भएरमात्रै जाने भन्दै अस्पतालमै बसेका भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले बताए ।
संक्रमण भई साथमै उपचाररत ७३ वर्षकी श्रीमतीसँगै शुक्रबार डिस्चार्ज भएका खाँडले आफूहरुको उपचारमा निरन्तर खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई भने, ‘लाखले पुग्दैन, करोडौँको धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपचारशैली, व्यवहारबाट आफूलाई ऊर्जा मिलेको भन्दै खाँडले भने, ‘कोरोनासँग डराउन पर्दैन ।’ बिरामी दुवैजनामा उच्च मनोबल रहेकै कारण कोरोना परास्त भएको र कोरोनाको उमेरगत र घातक रोगबारेको विश्लेषणलाई गलत साबित गरिदिएको भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले बताए ।
चिकित्सा विज्ञहरुका अनुसार संक्रमणको दोस्रो हप्ताबाट कोरोना भाइरस आफैँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ । अन्ततः भाइरस रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ र बिरामी निको भएर घर फर्कन्छन् । अहिले यही अवस्थामा छन्, चितवन भरतपुरका ७४ वर्षका पुरूष । जेठ ८ गतेबाट उनको उपचार थालिएको हो । उपचारको दिन दुई हप्ता कटिसकेको छ ।
बिरामीमा रोगसँग लड्ने क्षमता उच्च रहेकाले समस्या नदेखिएको अस्पतालका मेसु डा. श्रीराम तिवारीले बताए । वृद्ध अवस्थाका बिरामीमा कोरोनासँग वा अन्य जुनसुकै रोगसँग पनि लड्ने क्षमता कमजोर हुने भएकाले मृत्युदर उच्च रहने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । वृद्ध अवस्थामा क्यान्सर रोगको उपचार गराएर भारतबाट नेपाल घर आउने क्रममा उनी कोरोना संक्रमित बनेका थिए । त्यसको २ दिनपछि छोरामा पनि संक्रमण देखिएकोमा जेठ ३२ गते नै उनी डिस्चार्ज भएका छन् ।
एकको मृत्यु, नौ जना डिस्चार्ज
भरतपुरस्थित कोभिड ल्याबमा हालसम्म गरिएको पिसिआर परीक्षणमा ८१ वटा पोजेटिभ केस फेला परेको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले बताए । ५ हजार ६३४ परीक्षणमा ८१ वटा पोजेटिभ आएको हो । मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, सल्यान, प्युठान, पर्वतलगायतका जिल्लाबाट पनि नमुना आउने गरेको छ ।
चितवनका मात्रै ३७५२ वटा परीक्षण भएकोमा ३७ वटामा पोजेटिभ आएको हो । उक्त परीक्षणहरु भरतपुर र हेटौँडास्थित ल्याबमा भएको हो । ३७ जनामध्ये ९ जना डिस्चार्ज भएका, १ को मृत्यु भएको र २७ जना अझै भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत रहेका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।